Madaxweyne Ku-xigeenka Puntland oo Daah-furay Mashriicda Maalgelinta u Adkaysiga Abaaraha - (HILLAAC.NET) THE BEST INDEPENDENT RELIABLE SOMALI NEWS
June 25, 2019 at 13:37 Madaxweyne Ku-xigeenka Puntland oo Daah-furay Mashriicda Maalgelinta u Adkaysiga Abaaraha2019-06-25T13:37:27+01:00 WARARKA SOOMAALIYA
Madaxweyne ku-xigeenka dowladda Puntland Mudane Axmed Cilmi Cismaan Karaash ayaa daah-furay Mashaariicda maalgelinta u adkaysiga Abaaraha iyo kasoo kabashada Saamaynta Isbedelka Cimilada.
Mashaariicdan ayaa qorshuhu yahay inay ka faa’iidaystaan dadka ay saameeyeen abaarihii kala danbeeyey ee dalka ka dhacay, sida xoolo dhaqatada, Kalluumaysata, Beeralayda iyo in la hirgeliyo dhaamam biyaha lagu kaydiyo.
Shirkan oo ay soo qaban qaabisay Wasaaradda Qorshaynta iyo Horumarinta Dhaqaalaha Puntland, waxaana kasoo qayb galay masuuliyiin ka tirsan Goleyaasha Dowladda, qaar kamida Guddoomiyayaasha degmooyinka Puntland, ururada Bulshada rayid ka ah, Midowga Yurub, Saraakiil ka socdey dalalka Swedan iyo UK.
Madaxweyne Ku-xigeenka dowladda Puntland Mudane Axmed Cilmi Cismaan Karaash oo si rasmiya shirka u furay ayaa tilmaamay in shirkani yahay mid muhiimad wayn xanbaarsan, waxa uu sheegay in Soomaaliya ay baahi wayn u qabto mashaariicdani, gaar ahaan Puntland, marka loo eego abaarihii kala danbeeyay ee dalka ka dhacay iyo dadkii Soomaaliyeed ee usoo hayaamay.
Sidoo kale Madaxweyne Ku-xigeen Puntland Mudane Axmed Cilmi Cismaan Karaash ayaa u mahahceliyey hay’addaha kala duwan ee deeq bixiyayaasha ah, waxaana uu ku booriyey inay howshaan dar-dargeliyaan, isagoo caddeeyey in Dowladdu diyaar u tahay inay doorkeeda qaadato.
Mashaariicdan oo qayb ka noqonaysa kasoo kabashada abaarihii saamaynta lahaa ee dalka ka dhacay ayaa waxaa ka faa’iidaysandoona ku dhawaad 10 degmo oo ka tirsan Puntland iyo in ka badan 40 Tuulo.
« Wakiilka Cusub ee Gaarka ah ee QM u qaabilsan Soomaaliya oo soo gaaray Muqdisho
Khayre: Waxaan idinkugu imid in aan idinla dhiso Gulmudug midaysan »